သက်သေအထောက်အထား Technician အယောဘကိုဖျေါပွခကျြနမူနာ - JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Technician / သက်သေအထောက်အထား Technician အယောဘကိုဖျေါပွခကျြနမူနာ
သက်သေအထောက်အထား Technician အယောဘကိုဖျေါပွခကျြနမူနာ
ယာကုပ် ဧပြီလ 16, 2016 Technician မှတ်ချက် Leave 937 views
စိတ်ရောဂါ Technician အယောဘကိုဖျေါပွခကျြနမူနာ
ဧပြီလ 7, 2016
သက်သေအထောက်အထား Technician အဓိပ္ပါယ်
အဆိုပါသက်သေအထောက်အထားများနည်းပညာရှင်အလုပ်အကိုင်ဖော်ပြချက်စုဆောင်းပါဝငျသညျ, လက်ခံရရှိ, ဆန်းစစ်, နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်သေအထောက်အထားများသို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှု၏သိမ်းဆည်းသော, ထိုသို့ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအထောက်အထားအက်ဥပဒေမှလိုက်နာစောင့်ထိန်းကြောင်းပေး (PACE).
အဆိုပါအထောက်အထားညှိနှိုင်းရေးမှူးရဲဦးစီးဌာနများအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်သေအထောက်အထား processing အတူအထောက်အထားညှိနှိုင်းရေးမှူးခေါင်းဆောင်ကူညီ.
အဆိုပါအထောက်အထားညှိနှိုင်းရေးမှူးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်သေအထောက်အထားစနစ်တကျ inventoried ကြောင်း insures နှင့်ကွင်းဆက်-of ​​ချုပ်နှောင်ထားထိန်းသိမ်းထားကြောင်း.
ရာဇဝတ်မှုရှုခင်း Technician များကကောက်ယူအားလုံးမတော်တဆမှုနှင့်ရာဇဝတ်မှုမြင်ကွင်းတစ်ခုအထောက်အထားထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့ marking အဆိုပါဖော်ထုတ်ကောက်ခံရေးစောင့်ကြည့်.
တရားရုံးတွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်သေအထောက်အထားများ၏တင်ပြချက်ဆွေးနွေးရန်ရဲတပ်ဖွဲ့အရာရှိနှင့်ပြည်နယ် s ကိုရှေ့နေချုပ်နှင့်အတူပေးအပ်.
ကစုဆောင်းနေသည်နှင့်ဘယ်လိုလုပ်ငန်းများ၌ဘယ်လိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်သေအထောက်အထားပါဝငျသောအရာကိုအပေါ်ရာဇဝတ်မှုရှုခင်း Technician များနှင့် entry-level ရဲအရာရှိညွှန်ကြားထား.
ကွင်းဆက်-of ​​ချုပ်နှောင်ထားရဲဦးစီးဌာနတို့ကကောက်ယူရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်သေအထောက်အထားများအသီးအသီးကို item ပေါ်တွင်ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း Insures.
ကွန်ပျူတာ terminal ကိုလည်ပတ်နိုင်စွမ်း
ရာဇဝတ်မှုမြင်ကွင်းများမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်သေအထောက်အထားများစုဆောင်းခြင်းအတွက်အခြားသူတွေရဲ့အလုပ် coordinate နိုင်စွမ်း
လက်ခံနည်းစနစ်များနှင့်နည်းလမ်းများအလုပ်သမားတစ်ဦးရာဇဝတ်မှုမြင်ကွင်းတစ်ခုကို process ရန်နှင့်ထိုအကျွမ်းကျင်မှုအတွက်အခြားသူများကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့နိုင်စွမ်း
လေ့ကျင့်ရေးမဆိုပေါင်းစပ် ,အထက်တန်းကျောင်းသို့မဟုတ်သိုလှောင်အတွက်တစ်နှစ်အတွေ့အကြုံ GED .A နိမ့်ဆုံးအနေဖြင့်ကျောင်းဆင်းပွဲမှပညာရေးနှင့်အတွေ့အကြုံနှင့်ညီမျှ,စာရင်းထိန်းချုပ်မှု,ဒါမှမဟုတ်သင့်လျော်စွာ related လယ်ပြင်,ပိုကောင်းတဲ့ဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်သို့မဟုတ်မြင့်မားသောလုံခြုံရေးပတ်ဝန်းကျင်တွင်.
လွန်ခဲ့သော traffic Signal Technician အယောဘကိုဖျေါပွခကျြနမူနာ